NEPALI NEW TESTAMENT
मुक्तिको योजना भनेको के हो?
१ कोरिन्थी2Corinthians
२ कोरिन्थी Galatians
१ थैसलोनिकी2Thessalonians
२ थैसलोनिकी 1 Timothy
२ तिमोथी Titus
याकुब 1 Peter
२ पुत्रस 1 John
१ युहन्ना2John
३ युहन्ना Jude
Psalms 1 to 75
भजनसंग्रह Psalms 76 to 150
Nepali Old Testament
१ यहुन्ना५:१३ “तिमीहरुले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने तिमीहरुलाई यो पत्र लेख्दैछु।” परमेश्वर हामीले मुत्ती पाएको भन्ने बुझेको चाहानु हुन्छ।
I छुत्कारा दिनु, ऋण मेटाउनु हो।
रोमी ३:१० धर्मशास्त्रले भन्दछः “त्यहाँ पापरहित मानिस कोही छैनन्। एउटै पनि छैनन्!
रोमी ३:२३ हामी सबैले पाप गरेका छौं हामी सबैले परमेश्वरलाई मन नपर्ने ब्यवहारहरु गरेका छौं।
छुत्कारा दिनु, ऋण मेटाउनु हो।
II अनन्तको मृत्यु हामीले आफ्नो पापद्वारा कमाएका छौं।
रोमी ६:२३ किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशु हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो.
प्रकाश 21:8 तर मानिसहरु जो कातर, अविश्वासी घृणाजनक कर्म गर्ने, हत्यारा व्यभिचारी जादूवाला, मूर्तिपूजक अनि जम्मै झूटा बोल्नेहरु छन् तिनीहरुले गन्धकको अग्नि कुण्डमा ठाँउ पाँउछन्। यो दोस्रो मृत्यु हो।
III येशु क्रुशमा मर्नुभयो, हाम्रो योग्यको संजाय- मृत्युलाई अंगाल्नु भयो।
१पत्रुस १:३ परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशु ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ! ऊहाँको महान् कृपाले मृतकबाट येशु ख्रिष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौं.
१५:१-२८ परमेश्वरको आराधना होश, येशु ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरउत्थान बाट रोमी६:२३दोश्रोभाग साँचो छ “... तर परमेश्वरको सित्तैंको वरदान ख्रीष्ट येशु हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो”।
IV परमेश्वरको अनुग्रह र दयाको कारण, तपाईले केवल विश्वास साथ ग्रहणगर्न मात्र सक्नुहुन्छ ।
प्रेरित 4:12 अरु कसैमा मुक्ति छैन, किनकि स्वर्गमुनि मानिसहरूको बीचमा अर्को कुनै नाउँ दिइएको छैन, जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउन सक्छौं।
एफिसी 2:8-9 किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट मुक्ति पाएका छौ र यो त तिमीहरू आफैद्वारा होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो। यो कर्मको प्रतिफल होइन, कसैले घमण्ड नगरोस्।
तीतस 3:5 तब हामी आफैले गरेका धार्मिक कामहरूको आधारमा होइन, तर उहाँकै कृपाअनुसार नयाँ जन्मको स्नान र पवित्र आत्माको नवीकरणद्वारा हामीलाई उद्धार गर्नुभयो।
V मुत्तीदाता भनेर विश्वाश गर्नुहुन्छ भने, तपाईको पापहरुका क्षमा पाउनु हुनेछ।
रोमी १०:९,१० किनकि यदि तिमीले येशुलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ, र परमेश्वरले ऊहाँलाई मरेकाहरुबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्नो ह्रिदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्वार हुनेछ. हो, हामी हृदयले विश्वास गर्छौं त्यसैले हामी धर्मी बनाइका छौं। अनि हामी विश्वास गर्छौं भन्ने स्वीकार गर्न हामी आफ्ना मुख खोल्दछौं त्यसैले हामी बचाईएका छौं। हामीले मुख खोल्यौं र विश्वास गर्यौ अनि हाम्रो उद्धार भयो। हो, धर्माशास्त्रले भन्छ, “जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्छ उसको उद्धार हुँदछ।
रोमी 10:13 हो, धर्माशास्त्रले भन्छ, “जसले परमप्रभुमा भरोसा राख्छ उसको उद्धार हुँदछ।
यदि तपाई येशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न चाहनु हुन्छ भने, यहाँ एक प्रार्थना तपाई गर्नसक्नुहुन्छ। तर सम्झनुहोस्, यो प्रार्थना वा अरुकुनै प्रार्थनाले तपाईलाई बचाउन सक्दैन। ख्रीष्टमा पुर्ण भरोसा गरेर मात्र पापबाट छुत्कारा पाइन्छ। यो प्रार्थना परमेश्वरलाई तपाईले ऊहाँमा गर्नु भएको विश्वास र तपाईलाई क्षमादान दिनु भएकोलागी धन्यवाद चधाउने एक साधारण अभिब्यत्ति मात्र हो।
मैले तपाईको खिलाफ पाप गरेको छु र दण्ड भोग्नको योग्य छु। तर मेरो लायकको संजाय येशु ख्रीष्टले लिनु भयो ताकि उहाँमा विश्वास गरेर मलाई क्षमा भएको छ। म आफ्नो पापबाट फर्केर मेरो मुत्तीको लागी तपाईमा भरोसा गर्दछु। तपाईको महान अनुग्रह तथा पाप क्षमाको लागि धन्यवाद दिन्दछु! आमेन!